Madaxweynaha Turkiga oo furay mid kamid ah masaajidda ugu weyn ee Yurub – Bandhiga
Madaxweynaha Turkiga oo furay mid kamid ah masaajidda ugu weyn ee Yurub
Madaxwaynaha Turkey Rajap Dayyip Erdogan ayaa furay mid kamid ah masaajiida ugu weyn magaaladda Cologne ee dalka Germany iyo Yurub inteeda kale , sida ay sheegtay warbaahintu.
Hadal uu ka jeediyay xafladda furitaanka ayaa madaxweyne Erdogan uu ku sheegay in Islaamku uu yahay diin nabadeed, oo meelna aynan kasoo galin argagixisada,isaga oo aanan wax xiriir la lahayn ururka ISIS iyo ururada la midka ah.
Waxa uu sheegay in masjidka Cologne uu yahay mid diidan iska hor’imaadka, cadaawad iyo argagixisada,waxana uu muujiyay rajada uu ka qabo in maamulka Germany oggollaan doono furitaanka mashaariic la mid ah kan magaalooyinka kale.
Erdogan ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in muslimiintu ay dhistaan xiriirkooda sida ay ugu habboon tahay habka waafaqsan Xadiiska Nabiga(SCW) ee ah, “Muslimku waaka gacantiisa iyo afkiisu ay ka nabad galaan Muslimiintu”.
Masjidkan ayaa waxa uu ku yaallaa meel xarun uu ka dhisay Ururka Islaamka ee Turkey ee Arrimaha Diinta, oo xiriir dhow la leh masuuliyiinta Turkey-ga waxa Masjidkan laga dhisay sibidh iyo muraayaddo,waxana jooga minaaradiisu ay gaarayaan 55 mitir, halka wareega qudbigiisu uu yahay 36 mitir,waxana uu ku fadhiyaa 4,500 mitir,kaasoo loo qaabeeyay si uu noqdo summad furfurnaanta, sida uu sheegay Paul Baum oo ah engineer ka dhisay .
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay in masjidku uu qaadayo kumanaan qof oo dadka ku cibaadaysanaya.
Masjidka oo banaanka laga sawiray